आँ गरे अलङ्कार पर्ने ठाडी भाका - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
9 October, 2020 6:01 pm
लय, छन्द, अलङ्कार, बिम्ब, रस सहितको प्रस्तुति भयो भने सुनौँ सुनौँ लागिरहन्छ । यस्तो प्रस्तुतिले हृदय छुन्छ र मुटु झनझनाउँछ । विम्ब नजरमै आई बस्छ र आँखा लोलाइदिन्छ । अन्तस्करणलाई आकर्षित गर्छ अनि दिलदिमागमा प्रतिध्वनित भइरहन्छ ।
भाषामा यी गुणहरु सहित हुनाका भाव, गुण वा अवस्थालाई साहित्य भनिन्छ । जीवनजगतसँग सम्बन्धित विविध विषयमा सौन्दर्य, रूप, गुण, भावुकता आदिका दृष्टिले अभिव्यक्त हुने वा रस, छन्द, अलङ्कार आदिले यथासम्भव सजाई रचिएको हृदयस्पर्शी गद्य वा पद्य लेख, ग्रन्थ वा जुनसुकै प्रस्तुति साहित्य हो ।
ठाडी भाकाहरुले पनि साहित्यमा हुने सबै गुणहरु बोकेका हुन्छन् भनी पहिलेका लेखहरुमा बताइसकिएको छ । यस लेखमा ठाडी भाकामा प्रयुक्त अर्थालङ्कारको सम्बन्धमा साधारण चर्चा गरिनेछ ।
अर्थको चमत्कारद्वारा भाषा वा काव्यको सौन्दर्य बढाउने कला नै अर्थालङ्कार हो । यसमा बिम्बविधानको त्यो रुप आउँछ जसले भावलाई सशक्त पार्दै मानवचक्षु सामुन्ने प्रस्तुतिको विम्ब प्रस्तुत गर्दछ । कानमा भाकाको सुमधुर लय प्रवेश गर्दा आँखामा सजीव चित्र उतार्न थाल्दछ । अलङ्कृत कल्पनाले साकार रुप धारण गरेर आँखै अगाडि सौन्दर्यले धपधपी बलिरहेको छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ ।
अलङ्कारले श्रोताहरुलाई लठ्याउनुको पछाडि शब्दार्थमा रहेको शक्तिले गर्दा नै हो । शब्दशक्ति तीन प्रकारका हुन्छन् : अभिधा, लक्षणा र व्यञ्जना । स्वाभावोक्ति र समुच्चय अलङ्कारले अभिव्यक्तिलाई वाच्यार्थप्रधान तुल्याउँछन् । अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा जस्ता अलङ्कार प्रयुक्त भएमा लक्ष्यार्थप्रधान हुन जान्छन् भने समासोक्ति, विशेषोक्ति आदि अलङ्कारहरुको प्रयोग गरेर प्रस्तुतिलाई व्यङ्ग्यार्थप्रधान तुल्याउन सकिन्छ ।
विभिन्न विद्वानहरुले अलङ्कारलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरेका छन् । यहाँ साहित्यमा हुने साझा तथा मुख्य मुख्य अलङ्कारहरु र ठाडी भाकामा प्रयोग हुने अलङ्कारको विषयमा मात्र चर्चा गरिनेछ ।
उपमाको अर्थ हो समता तुलना, दँजाइ, दृष्टान्त, उदाहरण दिनु । अर्थात् कुनै एक वस्तुलाई अर्को वस्तुसँग दाँज्ने वा तुलना गर्ने काम नै उपमा हो । अप्रसिद्ध वस्तुलाई प्रसिद्ध वस्तुसँग तुलना गरे उपमा अलङ्कार हुन्छ । यस अलङ्कारमा प्रस्तुत र अप्रस्तुत कुनै दुई भिन्न वस्तुको सादृश्य मिलाई तुलना गरिन्छ र भिन्नता कायम राखिन्छ । तलको उदाहरण हेरौँः
जा गुवाला मल फाली आ तेरा दुई भैसैको
मन मेरो हात्तीकै जस्तो कर्म दुई पैसैको ।
उपमाका चार तत्त्व हुन्छन्: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म र वाचक शब्द । उपमेय भनेको उपमा दिन योग्य अर्थात् तुलना गर्न लायक भनेको हो । उपमा वा समानता दिइने वस्तु नै उपमेय हो । माथिको टुप्पोमा ‘मन मेरो हात्तीकै जस्तो‘ मा मन उपमेय हो । उपमेयलाई जुन विशेषण वा नामले उपमा दिइन्छ त्यो उपमान हो । उपमान भनेको उपमा वा समता गरिने वस्तु भनेको हो । अर्थात् कुनै अर्को वस्तुको बराबरी वा समानता बताउने वस्तु वा व्यक्ति उपमान हुन्छ । उपमेयलाई पुष्टि गर्ने तत्त्व नै उपमान हो । माथिको ठाडीभाकामा ‘मन मेरो हात्तीकै जस्तो” मा हात्ती उपमान हो । यसै गरी उपमा दिइने आधार वा गुणलाई साधारण धर्म भनिन्छ । हात्तीकै जस्तो भनेको ठूलो भनेको हो । यहाँ साधारण धर्म लुप्त गरिएको छ । उपमा दिनको लागि समतुल्य शब्दलाई वाचक भनिन्छ । यहाँ ‘जस्तो‘ वाचक शब्द हो । यसै गरी सरी, झैँ, हेरी, आदि वाचक शब्दहरु प्रयोग गरेर उपमा दिन सकिन्छ ।
माथिकै उदाहरमा कर्म दुई पैँसैको भन्ने पद्यांशलाई हेरौँ । यहाँ कर्मलाई दुई पैँसासँग तुलना गरिए तापनि वाचक शब्द लोप भएको छ । वाचक शब्द लोप हुँदा उपमा अलङ्कार नभई रुपक अलङ्कार हुन पुग्दछ ।
उपमा अलङ्कार प्रयोग गरिएका अरु ठाडी भाकाहरु हेरौँ
भैसीले दमारै काट्यो गोठालो बबैछ,
क्यार्न रुन्चै जल्ने मन तो जस्तो सबै छ ।
गाउने झैँ बजाउने राम्रो बजाउनेकी जोइ नाई
घरभरी कबीला मेरा मन बुझाउने कोइ नाई ।
बाटैतिको तले घर मल माटी लेस्तै छु,
साइले भन्छौ म बैरागी, म पनि त्यस्तै छु ।
सालको पात केलाई टिप्यौ पतरा गाँसन
पैला जस्तो आउँच आन्न बाँवरी बासना ।
सोलाबाङको जङ्गलैमा लम्की हर्च बाग
साईका हेरी म क्या छु र ओइलाएको साग ।
जिउ गया जतिकै लाग्छ जोवन जाने वेला ।
पुलाखरी काटी ल्याइदेऊ रंगमालु गाईलाई
रामसीता जोडीजस्ता क्या सुहायो साइलाई ।
घर छाडी परदेश जाने दैव केले बनाई
विधुवाझैँ बस्नु पर्‍यो, सिँदुर छँदै मलाई ।
उपमेय (जसको तुलना गरिन्छ) मा नै उपमान (जोसँग तुलना गरिन्छ) को आरोप गर्दा रुपक अलङ्कार हुन्छ । अर्थात यसमा उपमेय र उपमानको भिन्नता नराखी एउटै रुपमा बयान गरिन्छ । उपमा अलङ्कारमा साधारण धर्म र वाचक शब्द हटाइदिँदा रुपक अलङ्कारमा लान सकिन्छ भन्ने कुरा माथिको उदाहरणमा बताइसकिएको छ ।
बाखरीलाई किलादाउँला भेरीलाई हुलौँला
होइजाउँ बाजै जोली सुवा लेखलेखै डुलौँला ।
माथिको ठाडी भाकाको टुप्पोमा होइजाउँ बाजै जोली सुवामा उपमेय आफूहरु (आफू र प्रेमी) लाई तुल्याइएको छ । उपमान सुवालाई बनाइएको छ । यहाँ आफ्नो जोडीलाई सुगाको जोडीसँग तुलना त गरिएको छ तर जस्तो, सरि, आदिको प्रयोग गरिएको छैन । ठाडी भाकामा रुपक अलङ्कार प्रयोग गरिएका अरु उदाहरणहरु हेरौँ
एउटै मुलको पानी खाउँला होइजाऊँ जोली हांस ।
डाली भाइगो उत्तिसैको,पात झर्यो‍ काउलीको
सिति माया लाग्याउ छैन,लेक चर्ने न्याउलीको ।
बर्खामा उर्लने मुल हिउँद रसाउँदैन
आजकल माया फुल्दैनौ कि कतै बसाउँदैन ।
काँचो छाम्नु, पाको छाम्नु, तिजु माजा फल
देख्नु भै, पैरनु भैनै कर्णालीका जल ।
धानबालो चिउरेनी भैगो पिपलु छायाले
ज्यान सुकेर लौरी भैगो साई तिम्रा मायाले ।
उत्प्रेक्षाको शाब्दिक अर्थ हुन्छः अन्दाज वा अनुमान । प्रस्तुत कुरामा अप्रस्तुत कुराको कल्पना गर्दा उत्प्रेक्षा अलङ्कार हुन्छ । उत्प्रेक्षा अलङ्कारमा स्वाभाविक कुरालाई कुनै हेतु वा क्रियाद्वारा अर्कै रुपमा प्रकट गरी सम्भावना दर्शाइएको हुन्छ । तलको उदाहरण हेरौँः
बीस बाइसे निगालीको भाइले बुन्यो भाँर
फूल भया बारमासै फुल्दाऊँ जोवन एकै बार ।
यहाँ प्रस्तुत अर्थात् सदाबहार वस्तु फूल हो । वर्षौँदै फूल बारमासै फुलिरहन्छ । तर जीवन भने एकैचोटी मात्र भोगिने हो । जीवनको महत्त्वपूर्ण अंश यौवन हो जुन बीसबाइसे उमेरमै फुलेर ओइलाइसक्छ । यहाँ जोवन अप्रस्तुत कुरा हो । अरु उदाहरणहरु हेरौँः
गैरा पर्यो‍ पिपलुए,डाँरा सल्ली धुपी
एकै दिन जन्मेका हौँ कि करमैका दुःखी ।
खेतैको आलीमा बसी माग्नुपर्‍यो वया,
साई र म वयालै खेल्दाऊँ एउटै गाउँमा भया ।
अतिशयोक्तिको अर्थ हुन्छ उक्तिमा अतिशयता । सामान्य कुरालाई बढाइचढाइ गरेर वर्णन गर्दा अतिशयोक्ति अलङ्कार हुन्छ । यस अलङ्कारमा उपमेयलाई लुकाई उपमानको मात्र उल्लेख गरिन्छ । अर्थात् प्रस्तुतलाई लुकाई अप्रस्तुतद्वारा क्रियाको वर्णन गरिन्छ । अर्को शब्दमा कुनै कुराको वर्णन सीमा नाघी चर्कोसित बढाएर गरिएमा अतिशयोक्ति अलङ्कार हुन्छ । यस अलङ्कारलाई प्रतीकको रुपमा समेत लिइन्छ । वास्तविकताभन्दा बेसी बढाईचढाई राम्रो पारी भनिएको कुरामा हुन आउने एक अलङ्कार हो । तलको उदाहरण हेरौँ
स्यानी भेरी ठूली भेरी भेट भइया रिम्नैमा,
गया जाला यो परानी सूर्जे फूल टिप्नैमा ।
यहाँ उपमान सूर्यलाई फूल ठानेर टिप्ने ईच्छा व्यक्त गरिएको छ । उपमेय कुनै प्रेमिकालाई लोप गराइएको छ । प्राण गए पनि फूल नटिपी नछोड्ने कुरा अतिशयोक्ति हुन गएको छ । अरु उदाहरणहरु हेरौँः
झालु गाईको मालु बाछी उदै खोली गैगो,
भस्मेइ माया क्यार्न लाइत्यौ धौ बिर्सिनु भैगो ।
पारी पर्यो तीनबैनी लेख वारी गर्फा धुरी,
सम्जना आएइको बेला चल्च मनमा हुरी ।
माया भन्दा मरी जाग्ने बैरागीको जात ।
ओस्साउने बास्सैको सुप्पो बयाली दाङैको,
घर छैन घरेली छैन म जोग्गी नाङैको ।
उपमेयमा भएका गुणहरू उपमानमा पनि असम्भव भएको रूपमा वर्णन गरिएको अलङ्कारलाई अद्भूतोपमा भनिन्छ । तलको उदाहरण हेरौँः
पारो पायो कुखुरीले फुल पार्यो भैसीले !
कपाल फाल्याँ बन्चराले रुख ढाल्याँ कैँचीले !!
शाब्दिक अर्थमा भन्दा अर्काको पछि नलाग्ने बानी, कार्य वा नीतिलाई अनन्वय भनिन्छ । अनन्वयको अर्थ उही हो । उपमेयलाई नै उपमान मान्ने अलङ्कार अननव्य अलङ्कार हो । तलको उदाहरण हेरौँ ।
यो घरै हो त्यो घरै हो घर पनि घरै हो
घरबारेसितैको माया डर पनि डरै हो ।
यहाँ घरलाई घरसँगै दाँजिएको छ भने डरलाई डरसँग तुलना गरिएको छ । पहिलो पङ्तिमा घर र दोस्रो पङ्तिमा डर उपमा अलङ्कार हुन गएका छन् ।
दृष्टान्तको शाब्दिक अर्थ हुन्छ प्रसङ्गमा आएका विषयवस्तुलाई छर्लङ्ग्याउने विषय वा वाक्य; प्रस्तुत गरिने उदाहरण । यस अलङ्कारमा दुई वाक्यमा एक अर्काको पारस्परिक विम्ब प्रतिविम्बको भाव सम्बन्ध हुन्छ । उपमान र उपमेयका धर्महरूमा सादृश्य भएका खण्डमा पर्ने अलङ्कार दृष्टान्त अलङ्कार हो । तलको उदाहरण हेरौँः
गारा पारी गार छालैको गारावारी छाया
खाइ मिठो भैसीकै दूध नखाइ मिठो माया ।
यहाँ माया उपमेय हो उपमान भैँसीको दूध हो । दुवै उस्तै मिठा छन् । तर कत्तिको मिठो जान्नको लागि भैँसीको दूध चाखेर हेर्नुपर्छ मायालाई भने नचाखी थाहा भैहाल्छ । अरु उदाहरणहरु हेरौँः
कान्ले चरी खोरै लाउँच, धागे चरी धाउँच।
अम्मलीले कक्कड खान्च, बैरागीले गाउँच ।
पानी पर्यो लोतामारे, घाम लाइगो तारिख्या
भैँसी ल्याउनु दोस्रो बेत्या, जोई ल्याउनु जारिख्या ।
मौरी घुम्च रसु खान म घुम्चु मायाले ।
दीपकको शाब्दिक अर्थ हुन्छ दीप वा बत्ती । तेजिलो पार्ने वा उज्ज्वल पार्ने चिज नै दीपक हो । दीपक अलङ्कारमा एउटै धर्म वा क्रियाका साथ प्रस्तुत वा अप्रस्तुतको समानता देखाइन्छ । प्रस्तुत थोरै हुन्छ भने अप्रस्तुत धेरै हुन्छ । काव्यमा प्रस्तुत र अप्रस्तुत दुवै विषयको समान धर्मको वर्णन हुने अर्थालङ्कार नै दीपक हो । तलको उदाहरण हेरौँः
सिप छैन कि छुरा छैन दारी फाल्दैनौ क्या,
माङीमाङी मोई खानेले भैसी पाल्दैनौ क्या ?
अपह्नुतिको शाब्दिक अर्थ हुन्छः लुकाउने वा बहाना गर्ने काम । ढाँटेर एक थोकलाई अर्कै थोकमा प्रस्तुत गर्दा अपह्नुति अलङ्कार हुन्छ । यस अलङ्कारमा प्रस्तुत वा विषय वा उपमेयलाई निषेध गरेर त्यही विषयमा अप्रस्तुत अथवा विषय वा उपमानको आरोप गरिन्छ । तलको उदाहरण हेरौँः
गाई दुने कलाँसे ठेकी भैँसी दुने गाबु
त्रिवेणी जुवाला बल्दा क्या निहुँले तापु ।
यहाँ त्रिवेणीको ज्वाला उपमान हो भने ताप्ने निहुँ पार्नु लुप्त धर्म हो । यहाँ उपमेयलाई जानी जानी लोप गरिएको छ । अरु उदाहरणहरु हेरौँः
चोली सिदेऊ मखमलैको टाॅक लाइदेऊ सिमीको
जसलाइ हेर्छु झल्को लाग्छ साइ माया तिमीको ।
गाइति जाने गुवालाले घाँस काट्यो कनौला
बैरागले गाउँछु गीत बैँसले भनौला ।
सन्देहको शाब्दिक अर्थ हुन्छः दोधार, अन्यौल, शंका, भ्रम वा भ्रान्ति । कुनै विषय वा कारण हो कि होइनको अवस्था नै सन्देह हो । उपमेयमा उपमानको चमत्कारले संशय हुँदा सन्देह अलङ्कार हुन्छ । तलको उदाहरण हेरौँ ।
परेवाले पानी खायो खोलैको तिरीमा
थोरै माया लुकायौ कि दन्तैको बिरीमा ।
उक्त ठाडी भाकाको टुप्पोमा रहेको उपमेय माया हो भने उपमान बिरी हो । मायालाई दाँतमा अड्किएको बिरीमा लुकाइएको शंका गरिएको छ । अरु उदाहरणहरु हेरौँः
माथी पर्‍यो जारे सेजे तल पर्‍यो ठाँटी!
चाल पाया फर्काउनेइ थियाँ बैँस जाने बाटी ।
मुग्लुखोला काठेसागु कस्काहुन किस्मत
बोल माछा मुखभरि पानी के पर्यो बिस्मात ?
काला जुत्ता सिर्के टोपी भाइ उँद गइत्यो कि,
क्या साइलाई चिनेइनि लाक्च भेट कैलै भइत्यो कि ?
मासु मीठो कालिजैको, झोल मीठो तित्रैको
मेरो दर्द साईलाई के था कलेजी भित्रैको ।
गाई दुन सकेन भाइले के भैंसी दोला र,
मनमा दर्द नहुन्यात को मान्छे होला र ?
अइल मेरो धान फलेन गैरी कम्द स्वारा
सद्देइ हुन् कि बलै हुन् दे बालीसाइका प्वारा ।
अर्थगर्भित टुक्कामय उक्तिलाई लोकोक्ति भनिन्छ । लोकोक्तिबाट समाजमा प्रचलित उखान तथा टुक्काहरुको माध्यमबाट नैतिकता तथा सदाचारका पाठहरु पढाइएको हुन्छ । यस्ता लोकोक्तिहरुलाई साहित्य वा गीतको माध्यमबाट सफलताका साथ प्रयोग गर्दा लोकोक्ति अलङ्कार हुन जान्छ । यही लोकोक्ति अभिधा अर्थमा प्रयोग हुँदा लोकोक्ति हुन्छ भने त्यही उक्ति लक्षणा वा व्यञ्जनाको अर्थमा प्रयुक्त हुँदा छेकोक्ति हुन्छ । तलका उदाहरणहरु हेरौँः
माथिबाट बग्दै आइयो कालो र कागत
बर्तुन लागोई मर्नेइ काल नलागोई बाफत ।
लक्कू डाली चक्कू खेल्छ बाँदरैको छाउनो
माया भन्नु बिसौनीय जोवन भन्नु पाउनो ।
सुन पुरानो रङ्ग बुरो कैल्यै हुन्न लारे ।
यशु लेक पारिपट्टि गाई मरेको सिनो
स्याउली राखे ओइलाइजाला औंठी राख चिनो ।
वास्तविक विरोध नभए पनि विरोध झल्किएको देखिन्छ भने विरोधाभास अलङ्कार हुन्छ । तलको उदाहरण हेरौँः
विभावनाको शाब्दिक अर्थ हुन्छ अनुगामी वा प्रतिगामी अनुभूतिहरूको शृङ्खला; कल्पना; सोचाइ. आशय; विवेक; विचार वादविवाद; पक्षविपक्षबारे उठेको तर्क । कारण नभई कुनै कार्य भएको छ भने विभावना अलङ्कार हुन्छ । तलको उदाहरण हेरौँः
हलो ज्वाली कानामाथि बल्ल गाईका पेट ।
हलारी जर्मेइको छैन अर्नी गइगो खेत ।
यहाँ गाई ब्याएकै छैन बल्ल (गोरु) गाईका पेटभित्रै छ तर मैले त्यही गोरु जोत्ने उद्देश्यले काँधमा हलो र जुवाली राखिकेँ । उता जो हलारी जन्मेकै छैन उसैको लागि नास्ता खेतमा पुगिसक्यो !
व्यतिरेकको शाब्दिक अर्थ हुन्छ परस्पर नमिल्ने विरोधी गुण वा कारण, अन्तर, भेद, अन्वयभन्दा भिन्न प्रक्रिया, अतिक्रमण । उपमानभन्दा उपमेयमा बढी गुण देखाएमा व्यतिरेक अलङ्कार हुन्छ । केही धर्मका आधारमा समान उपमान, उपमेयमा उपमानभन्दा केही गुणको आधिक्य वा न्यूनता भई वैधर्म्य वा फरक बुझिएमा व्यतिरेक अर्थालङ्कार हुन जान्छ । तलको उदाहरण हेरौँ
रोल्पाली जिम्म्वालकी छोरी खोलापारि गाँउचे
जो तोला चाँदोमा छैने उईले खाँति लाउँचे ।
भिन्नभिन्न वाक्यार्थमा उपमान र उपमेयको कल्पना गरी अभेद सम्बन्ध देखाउँदा निदर्शना अलङ्कार हुन्छ । दुई वाक्यका अर्थमा अन्तर हुँदाहुँदै पनि उपमाद्वारा तिनीहरूका सम्बन्धका कल्पना गर्दा साहित्यमा हुने अर्थालङ्कार नै निदर्शना अलङ्कार हो । केही उदाहरण हेरौँः
अरुले मैपानी खादा गुवालाले तर खा
सगर खस्ने भल उर्छिने लाइगो काली बर्खा ।
अईल मले गौ छर्या र सबैले जौ भन्या
धुरुक्क रोई जाउला तोला यो मनको कौ भन्या ।
आदि मैना मंशिरैको भर मैना पुसैको ।
आईसेल भन्नु मेरो हैन जो बाँच्यो उसैको ।
माथि प्रस्तुत अर्थालङ्कारका विभिन्न भेदहरु र प्रत्येक भेदको ठाडी भाकाका उदाहरणहरुबाट ठाडी भाकामा पनि अर्थालङ्कारको प्रचुर मात्रामा प्रयोग भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । ठाडी भाका गाउन आँ गर्ने बित्तिकै कुनै न कुनै अलङ्कारको प्रयोग हुने कुरा उल्लिखित उदाहरणहरुबाट छर्लङ्गै देख्न सकिन्छ ।